Axmed Madoobe oo ka hadlay isku dhafka Ciidamada M/ Gobaleedyada. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Axmed Madoobe oo ka hadlay isku dhafka Ciidamada M/ Gobaleedyada.
Sabti, October, 27, 2018(HNN) Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ahmiyad weyn ay u leedahay Maamulkiisa isku dhafka ciidamada daraawiishta Maamul Gobaleedyada.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay qorsheynayaan sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ugu saari lahaayeen Deegaano ka tirsan Gobalada jubooyinka iyo Gedo oo qeybo badan oo ka mid ah ay joogaan Al-Shabaab.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa uu tilmaamay in Amniga ay wax badan ka qaban doonaan, islamarkaana saacadaha soo aadan ay weerar ku yihiin Deegaano ka tirsan gobalada jubooyinka iyo Gedo.
Hadalka Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxaa uu ku soo aadayaa xili Dhawaan madaxda Maamul Gobaleedyada shir ku yeesheen magaalada Garoowe ay ku iclaamiyeen in ay sameystaan ciidamo isku dhaf ah, kuwaasi oo loogu tala galay sidii ay ugu hortagi lahaayeen Weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan Gobalada Dalka.
Axmed Madoobe oo ka hadlay isku dhafka Ciidamada M/ Gobaleedyada. added by admin on 27/10/2018